TOP NEWS:- Musharax ka sheekeeyay deegaanadii Somaliland ay qabsatay iyo qaabka uu doonayo in uu kusoo celiyo.
December 6, 2018 marqaan Puntland, Somalia, Somaliland, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland, Wararka Sool Iyo Tukaraq 3
Maxamed Cismaan Maad oo kamid ah Musharixiinta u taagan qabashada xilka Madaxtinimada Puntland ayaa si kulul uga hadlay Dhulka somaliland ay qabsatay sanadihii lasoo dhaafay.
Musharaxaan oo taageerayaashiisa kula hadlayay Baraxadda Garoowe taagan yidhi:” Somaliland siyaasad ayey ka leedahay dhulkeenna Daahir Riyaale Laascaanood buu qabsaday, Siilaanyo Gambadhe ayuu qabsaday, Muuse Biixina isagoon maalin joogin ayuu Tukaraq yimi,waxaan ballan qaadayaa in aan soo cesho soohdimaha saxda ah ee Puntland”.
isagoo sii hadlayay ayuu musharaxaan sheegayaan hadii la doorato inuu awood u adeegsan doono soo celinta deegaanada kamaqan gacanta Puntland isla markaana uu awooda isugu geyn doono xurreynta Gobolka Sool.
Hadalka musharaxaan ayaa kusoo aadaya xilli musharixiinta xildoonka ah ay mmuddooyinkii ugu dambeeyay ku hanjabayeen in ay soo celin doonaan dhulka kamaqan, waxaana taasi ay muujinaysaa sida musharixiinta ay kaga go’an tahay xxorreynta dhulka la haysto.
Soomaalilaan cidna dhul kama qabsan ee dhulka la leeyahay waa la qabsaday raggii lahaa baa QAAD KU BADASHAY.Saas weeye xaqiiqadu.Maxaa runta la iisaga indho saabayaa.Dad badan oo dhulbahante ah baa yiraahda Majeerteen ma rabaan in ay sool u diriraan.Majeerteen iyo reer puntlaanba diyaar bay u yahiin in ay u hiiliyaan Ilma saciid Harti.Laakiin meeye raggii reer Saciid Harti?Macquul ma aha wiilashii dhulbahante oo Qayilaya in ay kuwo Majeerteen u dhintaan dhulka dhulbahante.Marka hore ha soo baxo dhulbahante oo an aragno in ay dhab ka tahay in ay dhulkooda xoreeyaan.Haddii kale halkiina ku Qayila.Ninkii shalay ka khudbeynayey Lascaanood soo dhubahante ma aha?Haah oo wuu yahay.Adeerayaal markaad soo diyaar garoowdaan noo yeera hadda mashquul baan nahaye.
Kaasi waa iska hadle, Somaliland waa xagee?. Puntland waxa ay ku soo ceshan kartaa Goboladaas, in ay shacabka degan wax u qabato, meel kasta Gole deegaan ka dhisto, Biya ka soo saarto, Kaabayaasha dhaqaalaha dhisto, shacabka sidaas ayaa lagu yeeshaa, dadkaan iyagaa iska tegaaya. afarta harta Ciidan baa lagu wareejinayaa.
Naagihii majeerteen qaylo ayey ku waasheen hadaad somaliland faraha kala bixi waydaan garoowe ayey balantu inuu ahaa hartigan aad ka sheekaysaan geel hawdka daaqa waxba noogama duwana